Ama-carnivores aphakathi nendawo angachayeka kakhulu ekushintsheni kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ama-carnivores aphakathi nendawo angachayeka kakhulu ekushintsheni kwesimo sezulu
Izilwane ezichitha isikhathi sabo esiningi zifuna ukudla zingavezwa kakhulu yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, ngokocwaningo olwenziwe ngabaphenyi base-Imperial College London kanye neZoological Society of London (United Kingdom) futhi olushicilelwe kumagazini i-'Nature Ecology & Evolution '.
Futhi, izidlo eziphakathi nendawo, ezifana ne-crab fox noma ikati le-Bengal, ukuthola okuthile abazokufaka emlonyeni wabo kumele bahambe amabanga amade futhi amade ngokugawulwa kwamahlathi nokuguquka kwesimo sezulu.
Ukufinyelela kuleso siphetho, ososayensi basebenzise imininingwane yezidliwayo ezidla inyama ezivela emhlabeni wonke, kusuka kumahlosi kuya kuma-weasel. Ngakho-ke, bakwazi ukukhombisa lokho izinhlobo ezinesilinganiso esiphakathi nendawo, okungukuthi, lezo ezinesisindo esiphakathi kwe-1 kuya ku-10 kilos, zichithe usuku lonke zifuna ukudla, okubabangela ukucindezeleka okuningi futhi, ngenxa yalokho, kulimaza impilo yabo.
Ngokusho kukaSamraat Pawar, ovela eMnyangweni Wezesayensi Yezempilo e-Imperial College London, baphakamisa imodeli elula yezibalo ebikezela ukuthi isikhathi sokondla sincike kubukhulu bomzimba wesilwane. »Lokhu kungasiza ukubikezela izingozi ezingaba khona ezilwaneni ezidla ezinye ezibhekene nezinguquko kwezemvelo.». Imodeli enjalo isungulwe yithimba, elisebenzise idatha eqoqwe ngezindlela zokulandela umkhondo ezinjengamakhola omsakazo ne-GPS. Sekukonke, kwahlolwa idatha evela ezinhlotsheni ezidlayo zomhlaba ezingama-73.
Ngakho-ke, bathole ukuthi abadla inyama abaphakathi nendawo bafuna ukudla isikhathi eside ngoba zondla inyamazane okuthi uma iqhathaniswa nomzimba wayo incane, ngakho-ke iyashesha futhi kunzima ukuyibamba. Kulokhu kumele kungezwe ukulahleka kwendawo yokuhlala, okwenza kube nzima kakhulu ukuzingela izilwane ezizingelayo.
Uma ufuna ukwazi eminye imininingwane, yenza chofoza lapha ukufunda isifundo ngesiNgisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ama-carnivores aphakathi nendawo angachayeka kakhulu ekushintsheni kwesimo sezulu
Ama-cryptocurrensets njengendlela yokuxhasa ngezimali ukumelana nokushintsha kwesimo sezulu